Oghere ebe nkwakọba ihe Ere na mgbazinye na Realtyww Info
Oghere ebe nkwakọba ihe n'ime Delhi
Ebiputara site na Nikhil Solanki
nlele Oghere ebe nkwakọba ihe Bipụtara 2 months ago
Lọ nkwakọba ihe bụ ụlọ azụmahịa maka ichekwa ngwongwo. A na-eji ụlọ nkwakọba ihe eme ihe nke ndị nrụpụta, ndị na-ebubata ya, ndị na-ebubata ya, ndị na-ere ahịa, ndị ahịa, ụgbọ njem, wdg. Ha na-enwekarị ọdụ ụgbọ mmiri iji buba ma bujue ngwongwo na gwongworo. Mgbe ụfọdụ, a na-edobe ebe a na-akwakọba ngwongwo maka ịkwanye ma na-ebubata ngwa ahịa si n'ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ọdụ ụgbọ elu, ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri. Ha na-enwekarị cranes na forkl onyinye maka ngwongwo ndị na-ebugharị, nke a na-etinyekarị na ọkọlọtọ ọkọlọtọ ISO na-etinye na pallet racks. Akụrụngwa echekwara nwere ike ịgụnye arịa ọ bụla, ihe ndị ọzọ eji ebu ihe, akụkụ ihe, ma ọ bụ ngwongwo ndị ọzọ ejiri ọrụ ugbo, imepụta na imepụta. N’asụsụ Indian, a na-akpọ ụlọ nkwakọba ihe dị ka godown.